Ingxelo yokhuseleko ka-2018 ye-Android ngoku isemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kudala kudala UGoogle upapasha rhoqo iingxelo zokhuseleko kwi-Android. Ukongeza, ifemi inika iingcebiso kubasebenzisi kwi ungazigcina njani iifowuni zakho zikhuselekile. Inkampani yaseMelika ngoku ipapashe ingxelo yayo entsha yezokhuseleko, ibhekisa kunyaka ophelileyo. Kuyo sinedatha ebaluleke kakhulu kuyo yonke into enxulumene nokhuseleko kwinkqubo yokusebenza. Ingxelo yomdla omkhulu.
Ukusukela ngaphambili besisazi into malunga neendlela apho inkampani ifuna ukugcina ukhuseleko kwi-Android. Nangona le ngxelo isinika idatha echanekileyo ngakumbi kwiziganeko bekukho unyaka ophelileyo kule nkalo. Ngokuqinisekileyo oko kusinceda ukuba sibone yonke into ngombono omkhulu.
Kuyaziwa ukuba yenye yeengxaki ezinkulu esizifumana kwinkqubo yokusebenza ziinkqubo ezinobungozi. Sisenokufumana ezinye zazo kuGoogle Play. Nangona inkampani isebenza kumanyathelo kulo mbandela, ukongeza ekubeni nayo indlela yokufumanisa ukuba unayo. Kodwa kunyaka ophelileyo kukho uphuculo olukhulu. Umzekelo, kwikota ephelileyo, kuphela yi-0,08% yee-smartphones ze-Android ezosulelwe zizinto ezinobungozi ezivela kuGoogle Play.
Inani eliphantsi, elibonisa ukuba kukho umsebenzi olungileyo kwicala likaGoogle malunga noku. Nangona enye yezona zinto ziphambili kule ndawo yiGoogle Play Protect. Kuba esi sixhobo sinoxanduva lokuhlalutya usetyenziso oluninzi kwizigidi zezixhobo ngosuku. Ke ezoapps zinobungozi ziya kususwa. Ngokwedatha yenkampani, ihlalutya ngaphezulu kwe-50 yezigidigidi zokusebenza mihla le kwi-Android.
Kwixesha elidlulileyo, ukusebenza kwe-Play Protect kuye kwathandatyuzwa ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Nangona kwenziwe uphuculo oluninzi kuyo. Ngele ndlela, kuye kwaziwa ukuba sisixhobo esibalulekileyo Kwi-Android. Kuba sinokuyisebenzisa ngendlela elula xa isiza Skena i-malware kwifowuni. Kunyaka ophelileyo wayenomsebenzi omninzi, kuba wayeyazi indlela yokuthintela ukufakelwa kwesigidi se-1.600 seapps ezinobungozi ezingafikanga kuGoogle Play kwii-smartphones ngenkqubo yokusebenza. Uphuculo olukhulu. Kuba ikwazile ukuthintela iingxaki ezininzi kwiifowuni kwihlabathi liphela ngale ndlela. Nangona uphuculo lungabhekisi kwesi sixhobo kuphela.
Kukho utshintsho olukhulu kukhuseleko ngokubanzi. Amabala okhuseleko zibalulekile kwinkqubo yokusebenza. Ngaphandle kwamahemuhemu malunga notshintsho kwimeko ye-Android One, Siyabona ukuba inani lee-smartphones ezifumana ii-patches lonyukile. Amanyathelo afana neProjekthi iTrble okanye i-Android Enterprise ekhuthazwayo yinto eluncedo olukhulu kule nkalo, xa kufikwa kumba wokukhulula ii-patches zokhuseleko kwiifowuni. Ndiyabulela kuko konke oku, inani lee-smartphones ezifumana ii-patches lenyuke nge-84%. Ke umahluko uyaphawuleka kule nkalo.
Ukongeza, kutyhilwe ukuba izixhobo ezinje ngeGoogle Pixel bezingenabo ubungozi ekuxhatshazweni kwikota yokugqibela yonyaka ophelileyo. Ekugqibeleni, Awungekhe uyilibale inkqubo yokuvuza eneGoogle. Njengeenkampani ezininzi kumzi mveliso wobuchwephesha, uGoogle ubonelela ngemivuzo yokufumana iziphene ku-Android. Le yinto esele iqhubeka iminyaka eliqela ngoku, neziphumo ezilungileyo ukuza kuthi ga ngoku.
Kwakhona kwi-2018 ihleli injalo, ineziphumo ezilungileyo. Kulo nyaka uphelileyo, inkampani ihlawule malunga nezigidi ezintathu zeerandi kumvuzo. Zonke ngenxa yeempazamo ezahlukeneyo zokhuselo eziye zafunyanwa kwi-Android. Le yinto enceda kakhulu inkqubo yokusebenza ukuphucula. Ke uGoogle uya kuqhubeka nokuxhaphaza ezi ntlobo zeenkqubo, ngoncedo abalunikezelayo. Kwabo banomdla, ingxelo epheleleyo yokhuseleko yohlobo lwaseMelika inokuba njalo funda kule khonkco. Ucinga ntoni ngale ngxelo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » UGoogle upapasha ingxelo yokhuseleko ye-Android ka-2018